Baby Dhalashada Dhigashada: Sida loo sameeyo gaar Baby Dhalashada Dhigashada
> Resource > Talooyin > Samee gaar Baby Dhalashada Martiqaadka Big Event ah
Samee Dhigashada gaar Baby Dhalashada u Big Event ah
Dhalashadiisa Baby waa guul barakaysan ee koritaanka ilmahaaga, gaar ahaan dhalashada ilmaha hore. Si aad u dabaal dhacdooyinkan la taaban karo, lagu marti dhalashadiisa waa bilowgii aad si la yaab martidaada. A martiqaad dhalashada ilmaha gaar ah ka heli doonaa carruurta iyo saaxiibadood aad u waxyoonay oo soo jiitay midab dhalaalaya, sawirada funny, xoolaha cute, iyo wixii la mid ah. Waxaa laga yaabaa in aan la aamini karin in lagu marti dhalashada ilmahaaga u sheeg martida haddii ay tahay dhalashada ilmaha in la xasuusto.
Card A dhalashada ilmaha kaamil ah martiqaad beddeli doonaa keepsake wada jir ah ula Hawlaha xusuus. Waa maxay sababta aan shakhsiyeeyo casumaad dhalashada ilmaha u gaar ah in ay noqdaan qayb ka mid kaamil ah memories.ore ku faraxsan: Halkan waxaa ku Fikradaha First Dhalashada Dhigashada qaar ka mid ah Baby ee.
Waa Baby ee 1-da dhalashada xataa sida gaarka ah sida dhalashada laftiisa. Ka hor inta dhalashada kowaad, ayaguna aad u badan ayaa ka dhacay. Waxaad u baahan tahay dib u nooleeyaan xusuusahaasi macaan, iyo gabagabo barbaro iyagii u soo hayo xilliga sanadka ee maskaxdaada. Sida ku saabsan fikradaha martiqaad dhalashada 1st, eeg hoos.
1. Yaa ku casumay . Oo weliba waxaa qoyska iyo saaxiibada deggan meelaha u dhow, sidoo kale kugu casuumeynaa carruurta kale iyo waalidkood caruurta aad si joogto ah la ciyaaro. Waa waqtigii ugu fiicnaa ee labada carruurta iyo waalidka si ay ula xiriiraan dadka kale.
2. Number 1 weligiis . Waxaa ka mid ah waaweyn # 1 iyo sidoo kale magaca ilmaha, sidoo kale tirada taariikhda dhalashada ilmahaaga, wakhtiga, meesha iyo telefoonka.
3. Recent sawir . Ha martida ku garanayaa kii jeestay 1 sawir dhawaan. Waxay la yaabay doonaa: Sidee cute iyadu / isagu waa!
4. Mid ka mid ah dhalashada shumac.
Ma doonaysaa in la abuuro kaarka dhalashada qofka martiqaad on wixiinna? Isku day maa baxay DVD Muqaal dhise ? Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u sameeyo ilmaha lagu marti dhalashada shakhsi badan template card pre-loogu tala galay, arrimo collage oo lagu furdaamiyo iyo jadwalka. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud in la sameeyo marti dhalashada ilmaha elekterikal talaabo talaabo ah.
Samee Calendar Baby lagu maamuusayay Taariikhaha Muhiimka ah
Sida loo sameeyo a Baby Card Printable
Best Free Online Kan sameeyey Photo collage
Facebook Smileys waa in aad rabto in aad hesho
Messages Wedding Card, shaybaar haya- u Card Wedding ah
Fikradaha Nicmadiisa Wedding: Samee Nicmadiisa Wedding gaar u mahadsan martidaada
Wedding Photo Sharing - Sida loo wadaag Wedding Photos la Dadka More
Sida loo abuuro Survey la Survey dhise
Qoyska sawrirrada Fikradaha - Samee shakhsiga Qoyska sawrirrada
Ourpix Muqaal Software